म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीबजार सुनसान, गाउँ गाउँमा रमाइलो ! « News24 : Premium News Channel
म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीबजार सुनसान, गाउँ गाउँमा रमाइलो !
म्याग्दी, १ कात्तिक । नेपालीहरुको महान् पर्व दशैं मनाउन बजारबाट गाउँतर्फ सर्वसाधारण लागेपछि म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीबजार पनि सुनसान बनेको छ । सदरमुकाम बेनीमा डेरा गरी बस्दै आएका सर्वसाधारण, पसल सञ्चालन गर्ने व्यापारी, कर्मचारी, विद्यार्थी सबै दशैं मनाउन गाउँ गएपछि यतिबेला बेनीबजार सुनसान बनेको हो ।
दैनिकजसो बढ्दो जनसङ्ख्या र सवारीसाधनको चापले सधैं व्यस्त हुने सदरमुकाम बेनीबजारले दशैं लागेपछि विश्राम लिने मौका पाएको छ । बेनीका सडकमा फाट्टफुट्ट मात्रै यातायातका साधनहरु गुडिरहेका छन् । अघिपछि जताततै देखिने ट्राफिक जाम हिँजोआजा छैन । बेनीका अधिकांश पसलहरु बन्द भएका छन् । अत्यधिक चाप हुने बेनीको न्युरोड यतिबेला सुनसान अवस्थामा छ ।
बजारको मुख्य चोकमा भीडभाड र बजारमा किनमेल गर्न आउनेको सङ्ख्या पनि खासै देखिएको छैन । सामान्य अवस्थामा समेत जनसङ्ख्याको चाप बोकिरहेको बेनीबजार नवमीका दिनसम्म आइपुग्दा बजारका मानिसहरु मात्र बाँकी रहेका छन् । बाहिरबाट आएर बेनीमा बसेका कतिपयले भने यतै दशैं मनाउने तयारी थालेका छन् । खासगरी टिकाको भोलिपल्टदेखि बेनीबजारमा सर्वसाधारणहरु आउने क्रम सुरु हुनेछ ।
यसैबीच सदरमुकामको बेनीबजार सुनसान भए पनि जिल्लाको गाउँगाउँमा भने रमाइलो र खुसियाली छाएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरु पनि चाडपर्वको समयमा घर फर्कने हुँदा रमाइलो हुन्छ । ग्रामीण भेगमा रहेका कोत मन्दिरहरुमा धुमधामसँग नवदुर्गाको पुजाआजा भैरहेको छ । गाउँमा दशैंको समयमा युवा पुस्ताहरु भेला भएका छन् । गाउँमा हालिने लिङ्गे र रोटेपिङले समेत चाडपर्वमा उत्साह थप्ने गर्दछ ।